KEDU IJI GBANYỤỌ MMEMME MMALITE NA WINDOWS? - NJIKARỊCHA WINDOWS - 2019
Kedu iji gbanyụọ mmemme mmalite na Windows?
Onye ọrụ ọ bụla nwere ọtụtụ mmemme arụnyere na kọmputa ha. Na ihe niile ga-adị mma, ruo mgbe ụfọdụ n'ime mmemme ndị a amaliteghị idebanye aha ha onwe ha. Mgbe ahụ, mgbe kọmputa na agbanwụrụ, njigide amalite ịpụta, akpụkpọ ụkwụ PC ruo ogologo oge, njehie dị iche iche pụta, wdg. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-ebugharị na-adịkarịghị mkpa, ya mere, nbudata ha oge ọ bụla i tinyere kọmputa ahụ adịghị mkpa. Ugbu a, anyị ga-atụle ụzọ dị iche iche otu ị ga-esi gbanyụọ mbido ngwa ngwa ndị a mgbe Windows malitere.
Site n'ụzọ! Ọ bụrụ na kọmpụta ahụ kwụsịrị, ana m atụ aro ka ị mara nke a na:
1) Ivrest (jikọọ: http://www.lavalys.com/support/downloads/)
Obere ma kpatụ uru bara uru nke na-enyere gị aka ịhụ ma wepu mmemme ndị na-adịghị mkpa site na mmalite. Mgbe ị wụnye ọrụ ahụ, gaa na "mmemme / akpaaka".
Ị ga-ahụ ndepụta nke mmemme a na-ebugo mgbe ịgbanyere kọmputa. Ugbu a, ihe niile ị na-amaghị, a na-atụ aro ka ị wepu software ahụ ị na-ejighị oge ọbụla ị gbanye PC. Nke a ga-eji obere ncheta, kọmputa ga-agbanye ngwa ngwa ma ghara ịkwado ya.
2) Onye nlekota ihe (http://www.piriform.com/ccleaner)
Ihe bara uru bara uru nke ga enyere gi aka idozi PC gi: wepu ihe omume ndi na-adighi mkpa, kpochapu ya, wepu ohere diski diski, wdg.
Mgbe ịmalitere usoro ahụ, gaa na taabụ ahụ ọrụọzọ na ebudata.
Ị ga-ahụ ndepụta nke ọ ga-adị mfe iji wepụ ihe niile na-enweghị isi site na iwepụ akara ngosi.
Dị ka ọnụ, gaa na taabụ ihe ndekọ ahụ ma tinye ya n'usoro. Nke a bụ obere isiokwu na isiokwu a:
3) Iji Windows OS n'onwe ya
Iji mee nke a, mepee menuMalitema tinye iwu na akaramsconfig. Ọzọ, ị ga-ahụ obere windo na 5 taabụ: otu n'ime haebudata. Na taabụ a, ị nwere ike iwepu mmemme ndị na-adịghị mkpa.